Ahoana ny fanoloana takelaka laharana very na simba any Kenya - Victor Mochere
Ny Lalànan'ny fifamoivoizana dia milaza fa tsy misy fiara mandeha amin'ny lalana iray raha tsy raikitra amin'ny fomba voatondro ny takelaka famantarana. Ny takelaka fanoratana fiara dia matetika vita amin'ny metaly na plastika ary mipetaka amin'ny fiara na tranofiara mba ho famantarana. Nandritra ny taonjato maro nampiasana fiara, dia nanjary fitaovana ilaina amin'ny fiarovana ny mpamily ny takelaka nomerao. Izy ireo dia mamela ny famantarana ireo fiara tratran'ny lozam-pifamoivoizana sy ny fampiharana ny lalàna amin'ny lalana. Raha vao tsy ela akory izay no very na simba ny laharan-tariby dia tsy mila mikoropaka satria azo soloina.
Ny fepetra takiana rehefa mangataka fanoloana ny laharan-tariby
Ny fepetra takiana rehefa manangona ny laharanao
Fomba fanoloana takelaka laharana very/simba
Ireto ny fepetra takiana amin'ny fangatahana fanoloana takelaka laharana.
Boky firaketana tany am-boalohany
Kara-panondro na pasipaoron'ny tompon'ny fiara voasoratra anarana (tokony hifanaraka amin'ny anarana ao amin'ny diary)
Original sy dika mitovy amin'ny certificat de incorporation / Business Registration Certificate (ho an'ny orinasa)
Ireto ny fepetra takiana amin'ny fanangonana ny takelakao.
Laharana taloha (ho an'ny takelaka simba ihany)
ID na pasipaoron'ny tompon'ny fiara voasoratra anarana
Karapanondro na pasipaoron'ny olona nahazo alalana haka ny takelaka laharana
Taratasy manam-pahefana hanangona (ho an'ny orinasa)
Toy izao ny fomba fanoloana ny laharana very/simba.
Ampahafantaro any amin'ny tobin'ny polisy ny fatiantoka/fahasimbana ary alao ny sarin'ny polisy
Tsidiho ny biraon'ny DCI akaiky indrindra ary mangataha tatitra momba ny fananganana kasety. Ny fampiakarana kasety dia ny dingana ampiasain'ny DCI hanamarinana ny chassis sy ny laharan'ny moteranao mba hanamafisana fa mifanaraka amin'ny antontan-taratasy fisoratana anarana ny antsipiriany. Manoratra tatitra momba ny zavatra hitany izy ireo avy eo
Head over to NTSA vavahadin-tserasera ary midira
Safidio ny 'Apply for Reflective Number Plate'
Safidio ny fiara resahina ary eo am-piasana, tsindrio ny 'Ampiharo'
Safidio na very na simba
Safidio ny karazana takelaka apetrakao, na efajoro na oval
Fenoy ny habaka rehetra, ary ambarao raha soloinao ny takelaka laharana eo anoloana na aoriana, na izy roa
Avy eo, ampidiro ny tatitra momba ny fampiakarana kasety DCI, ary koa ny dika mitovy amin'ny bokinao
Tondroy ny fiantsonana tianao hisafidianana ny laharan-tariby
Ny dingana manaraka dia ny fandoavana, izay azo atao amin'ny alàlan'ny M-Pesa. Ny fanoloana takelaka laharana iray dia mitentina Ksh 1,150 ary Ksh 2,050 ho an'ny roa.
Alefaso ny fangatahanao ary miandry ny fampandrenesana avy amin'ny NTSA rehefa vonona ny laharanao
Manoro hevitra ny NTSA fa manonta ny laharanao ianao ary manamboatra izany eo amin'ny efijery (fa tsy eo amin'ny fitoeran'ny laharanao)
Ny zava-dehibe indrindra, dia ento miaraka aminao foana ity antontan-taratasy ity (tsara kokoa raha misy kopia), sao voasakan'ny polisy eny an-dalana ianao. Ho afaka hanaporofo mora foana ianao fa eo am-pahazoana takelaka fahazoan-dàlana vaovao
Ny tombony amin'ny vokatra CBD